एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिय भारतसहित बिस्व लाईनै दिय कडा चुनौती – Your1click
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिय भारतसहित बिस्व लाईनै दिय कडा चुनौती
अव अपमानित हुनुपर्दैन, नेपालमा कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन : ओली
काठमाडौं – एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र, सन्तुलित र पारस्परिक सम्मानमा आधारित हुने बताउनु भएको छ । उहाँले सन ७० को दशकसम्म गरिवीको सूचीमा तल परेका राष्ट्रहरुले ३० बर्षका बीचमा अभूतपूर्व बिकास गरेको भन्दै अव नेपालको एकमात्र प्राथमिकता बिकास हुने बताउनु भयो ।
शहिदहरु हरि नेपाल र चन्द्र पुरीको ३८ औं स्मृतिसभामा शुक्रबार बोल्दै उहाँले नेपाल अव स्वतन्त्र र पारस्परिक सम्मानका आधारमा तिव्र बिकासका साथ अघि बढ्ने बताउनु भयो । ‘अव हाम्रो विदेश नीति सन्तुलित, स्वतन्त्र र परास्परिक सम्मानमा आधारित हुनेछ । यो सँगै स्थीर सरकारले बिकासलाई केन्द्रमा राखेर काम अघि बढाउँछ’ ओलीले भन्नुभयो ।
अव नेपाललाई कुनै पनि देशले अपमानित गर्न नसक्ने पनि उहाँले बताउनु भयो । उहाँले गरिव देश भन्नेबित्तिकै पहिला रुवाण्डा र इथोपियाको नाम आउने गरेकोमा अहिले त्यसमा नेपालको नाम आउन थालेको दुःख लागेको तर अव त्यो अवस्था अन्त्य हुने बताउनु भयो ।
‘पहिला अपमानित थियौं, अव अपमानित हुनुपर्दैन । अव कसैले हस्तक्षेप गर्दैन, गर्न सक्दैन’ उहाँले भन्नुभयो,‘पहिला गरिव मुलुकको उदारण दिंदा रुवाण्डा, इथोपियाको उदारण दिन्थ्यौं । अहिले गरिवको फोटो हेर्दा नेपाल हेर्छन । कांग्रेसले २७ बर्ष सरकार चलाउँदा नेपालको यो हालत भयो । अव देशको तस्बीर बदलिन्छ । हामी बदल्छौं ।’
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले ३० बर्षका बीचमा तिब्र बिकास गरेको भन्दै नेपालको बिकासको रफ्तार पनि तिब्र हुने बताउनु भयो । एमाले नेतृत्वको वामपन्थी सरकारले नेपाललाई बिकास र स्थायित्वतर्फ डोहोर्याउने भयो भनेर नेपाली कांग्रेस अत्तालिएको बताउनु भयो ।
‘केही पत्रकार, लेखक र बुद्धिजीविले वाम गठवन्धनले बहुमत ल्यायो भन्दै सरकार चलाउन कसरी पाउँछ ? जनमत गुमाएको देउवा सरकारले नै अझै देश चलाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो,‘ अझै पनि उनीहरु ओलीले अहंकार भनेर लेख्छन् । अल्पमतमा परिसकेको सरकार नछोडाउन एक खालका मान्छे लागेका छन् ।’ उहाँले पाँच बर्षपछि जनतामा फेरी मत माग्न आउनै नपर्ने गरी काम गर्ने बताउनु भयो । ‘पाँच बर्षपछि भोट माग्न आउनै नपर्ने बनाउछौं । त्यसबेला केही बाधा रहँदैनन्, हाम्रो पराजय हुँदैन ।’
← बाबुबाट बलात्कृत छोरीको बेदनाः आमा पोइला गइन्, बाबुकी श्रीमती भएर बस्नुपर्ने कस्तो कर्म !
कम्युनिष्टहरु फटाहा कुरा गर्छन्, विकास कांग्रेसले गरेको हो – प्रधानमन्त्री देउवा →
December 25, 2017 sagar SHRESTHA 0